के हो HiSET ™? बारेमा HiSET ™ सिक्न | यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
के हो HiSET ™? बारेमा HiSET ™ सिक्न
के हो HiSET ™? सबै सिक्न तपाईँले HiSET ™ जान्नु आवश्यक.
को HiSET ™ आफ्नो समझ र ज्ञान को परीक्षण छ. HiSET ™ के हो - नाम HiSet ™ हाई स्कूल Equivalency परीक्षण को लागि छोटो छ. को HiSET ™ परीक्षण पारित तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा उच्च विद्यालय स्नातक गर्ने एक व्यक्ति जस्तै ज्ञान र सीप छ देखाउँछ.
धेरै अमेरिकी र शरणार्थी र आप्रवासी उच्च विद्यालय समाप्त गर्न सकेनौं. एक उच्च विद्यालय उपाधि बिना, यो एक राम्रो काम प्राप्त र संयुक्त राज्य अमेरिका मा सफल गाह्रो हुन सक्छ. तर तपाईं HiSET ™ परीक्षण पास यदि, तपाईं एक उपाधि प्राप्त (प्रमाणपत्र) आफ्नो राज्य बाट. यो एक उच्च विद्यालय equivalency भनिन्छ (HSE) उपाधि, त्यसैले तपाईं कहिलेकाहीं हेर्न वा सुन्न सक्छ आफ्नो परीक्षण एक HSE परीक्षण रूपमा उल्लेख.
को HiSET ™ उपाधि तपाईं बराबर छ भन्छ (उस्तै) संयुक्त राज्य अमेरिका मा उच्च विद्यालय पूरा गर्ने कसैले रूपमा कौशल. यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो! मात्र तपाईं शिक्षा हासिल हुनेछ, तर तपाईं राम्रो काम विकल्प हुनेछ.
को HiSET ™ परीक्षण मा के?
के हो HiSET ™? त्यहाँ परीक्षण मा पाँच विषयहरू छन्: सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, पढाइ र लेखन. को RCO मुक्त अनलाइन कक्षाहरू को परीक्षण मा प्रत्येक विषय कवर. जब तपाईं तैयार तपाईं एक वर्ग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. वा तपाईं परीक्षण मा के बारेमा थप सिक्न सक्छौं.
को परीक्षण को लागि अध्ययन
गर्छ मेरो राज्य प्रस्ताव HiSET ™?
तपाईं हरेक राज्य मा HiSET ™ परीक्षण लिन सक्दैन. जो परीक्षण आफ्नो राज्य प्रस्ताव छ पत्ता लगाउन तलको तालिका हेर्न. यदि आफ्नो राज्य HiSET ™ प्रदान गर्दैन, तपाईं अझै पनि एक उपाधि प्राप्त गर्न सक्छन्. यी मध्ये एक लिंक परीक्षण बारेमा थप जान्न क्लिक गर्नुहोस् तपाईं आफ्नो राज्य मा लाग्न सक्छ:
• एक GED के हो® प्रमाण? • TASC के हो?